March 9, 2012 – democracy for burma
Myanmar’s endless ethnic quagmire – Bertil Lintner
On March 9, 2012 By Burma Myanmar newsIn BurmaLeaveacomment
Mon State Election Commission has refused pro-democracy leader Aung San Suu Kyi permission to runacampaign rally
The Mon State Election Commission has refused pro-democracy leader Aung San Suu Kyi permission to runacampaign rally at Than Lwin Garden in state capital Moulmein.
Ko Ko Zaw,asenior member of Suu Kyi’s National League for Democracy (NLD), told The Irrawaddy from his Moulmein party office that, “[The Election Commission] told us that the garden would be damaged. This is why they did not give permission.”
“We have the right to use it according to the law,” he added.
The Election Commission has instead allowed the event to take place inafootball field six miles (10 km) outside the city which critics claim will make it harder for local people to hear Suu Kyi speak.
“It is far for the people to go there. They need to take motorbikes,” said Ko Ko Zaw.
NLD sources claim the party asked twice to use Than Lwin Garden for their campaign, and complained that the replacement football field is onlyathird of the size.
The NLD has said that the restrictions on using public venues risked making the upcoming by-elections unfair. The Burmese election authorities last month lifted restrictions on political campaigning.
However, the NLD claims that some government departments continue to block the party’s campaign activities despite being approved by the Union Election Commission.
Similar problems have marred Suu Kyi’s campaign all around Burma, with planned speeches in Naypyidaw and Mandalay townships having to be hastily rearranged after access to venues was refused.
Suu Kyi also complained duringarally in Taungoo Township on Tuesday that NLD billboards were being defaced.
Suu Kyi will arrive in Moulmein on Saturday afternoon and will spend one night in the city before givingaspeech on Sunday morning, according to Khun Thar Myint, who is responsible for security during her visit.
The 66-year-old Nobel Laureate also plans to meet some members of Mon and other political parties duringadinner at the Strand Hotel.
Mon State has only one parliamentary seat to contest at the upcoming by-elections scheduled for April 1. There are four candidates from different political parties—Khin Htay Kywe from the NLD, Myit Myit Wai from the All Mon Regions Democracy Party, Aung Than Oo from the National Unity Party and Aye Myit from the Union Solidarity and Development Party.
The NLD boycotted the 2010 general election in protest at the 2008 Constitution which guaranteedalarge proportion of parliamentary seats for the military. But it agreed to rejoin electoral politics last year when the new military-backed elected president, Thein Sein, began implementing democratic reforms. irrawaddy news
On March 9, 2012 March 10, 2012 By Burma Myanmar newsIn BurmaLeaveacomment
KNU and Burma government to meet in April to formalize ceasefire
The Karen National Union and the Burma government have agreed to meet in early April to formalize and finalize their preliminary ceasefire arrangement that was reached inameeting on 12th January in the Karen State town of Pa-an.
The KNU general secretary, Naw Zipporah Sein, toldKaren News.
“Both sides agreed to meet in early April to continue to talk and to try to reachaconcrete cease-fire arrangement. At the moment the date and place have yet to be confirmed.”
On 2nd March, KNU representatives, led by Naw Zipporah Sein, and other high raking KNU executive members P’doh Saw Roger Khin, and military leaders General Mutu Say Poe, Brigadier General Mai Aye Sein, Colonel Saw Htoo Htoo Lay met with the Burmese government representatives in Thailand. The Burma government delegation was led by Railway Minister, U Aung Min, Security and Border Affair Colonel Aung Lwin, andamember of Myanmar Egress, U Kyaw Yin Hlaing, U Lat Maung Shwe. The delegation also included business people – U Ngwe Soe, U Ko Ko Maung and Ma Su.
Naw Zipporah Sein speaking to Karen News said.
“In future talks, we will focus our negotiations on about military matters – the movement of troops, the positioning of troops and security issues.”
Naw Zipporah said that the KNU will include women representatives in future talks between the Karen and Burma government.
“Talks will include the participation of women. The KNU already hasapolicy for the inclusion of women in the peace talk process. The participation of women has also been urged by the representatives of Karen communities and organizations from around the world.”
karen KIC news
ပအိုဝ်းအမျိုးသား လွတ်မြောက်ရေး တပ်မတော် တချို့ (ဓါတ်ပုံ – PNO)
ပအိုဝ်း အမျိုးသားနေ့သည်၊ တပေါင်းလပြည့် ဖြစ်ပါသည်။ ယခုနှစ် ပအိုဝ်း အမျိုးသားနေ့ အခမ်းအနားကို ပအိုဝ်း အမျိုးသား လွတ်မြောက်ရေး အဖွဲ့ချုပ်၏ လွတ်မြောက် နယ်မြေ တစ်နေရာဖြစ်သော ရှမ်းပြည်နယ် ဟိုမုန်းမြို့နယ်ခွဲ နယ်စပ်ရှိ လေဗွာ စခန်းတွင် ကျင်းပပြုလုပ် ခဲ့ပါသည်။ အခမ်းအနား အစီစဉ်များမှာ နံနက်စောစောပိုင်း အချိန်တွင် ဘုန်းကြီးကျောင်းကို ပဒေသာ ပင်များ အိုးစည် ဗုံမောင်းများနှင့် သွားရောက် ကတော့ ခဲ့ကြပြီး သံဃာ့ ဒါနဆွမ်း ဆက်ကပ် ခဲ့ကြပါသည်။ အခမ်းအနားကို မနက် ဝ၈းဝဝ နာရီ၌ စတင်ခဲ့ပြီး မနက် ဝ၉း၃ဝ တွင် ပြီးဆုံး ခဲ့ပါသည်။
အခမ်းအနား ဖွင့်လစ်ပြီးနောက် တက်ရောက်လာကြသော မဟာမိတ်ခေါင်းဆောင်များ PNLO ခေါင်းဆောင်များ ပအိုဝ်း အမျိုးသား လွတ်မြောက်ရေး တပ်မတော်သားများ ပအိုဝ်း မျိုးချစ်မောင်မယ် များနှင့် ကျေးရွာ ကိုယ်စားလှယ် များက ပအိုဝ်း အမျိုးသား အလံတော်နှင့် ပအိုဝ်းအာဇာနည်းများကို အလေးပြုခဲ့ကြပါသည်။
PNLO ၏ ပအိုဝ်းအမျိုးသား ထုတ်ပြန်ကြေငြာချက်ကို အထွေထွေ အတွင်းရေးမှူး ခွန်မြင့်ထွန်း မှ ဖတ်ကြားပါသည်။ ထို့ နောက် PNLO ဥက္ကဌ ဗိုလ်မှူးကြီး ခွန်ဥက္ကာနှင့် မဟာမိတ် ခေါင်းဆောင်များဖြစ်ကြသော WNO ဝအမျိုးသားအဖွဲ့မှ ဥက္ကဌ ဗိုလ်မှူးကြီး တာ့ပလွဲ၊ RCSS/SSA မှ ဗိုလ်မှူးကြီး စဝ်အောင်မြတ်၊ ကယန်းပြည်သစ် ပါတီမှ ဦးစိုင်းလုံ တို့မှ အသီးသီး အမှာ စကားများပြောကြားကြပါတယ်။ PNLO တွဲဖက် အတွင်းရေးမှူး (၁) ပအိုဝ်း အမျိုးသား လွတ်မြောက်ရေး တပ်မတော် စစ်ဦးစီးချုပ် ဗိုလ်မှူးကြီး ခွန်သူရိန်မှာ ယနေ့ အခြေအနေများကို ရှင်းလင်းပြောကြား ပါသည်။
အဲဒီနောက် ပအိုဝ်းအမျိုးသားကျောင်းမှ ဆုရကျောင်းသူကျောင်းသားများကို မဟာမိတ်ခေါင်းဆောင်များနှင့် PNLO ဒု ဥက္ကဌ ဗိုလ်မှူးချုပ် ခွန်တိဆောင်တို့က အသီးသီး ဆုချီးမြင့်ပေးခဲ့ကြကြောင်း သိရပါသည်။
ကရင်အမျိုးသား အစည်းအရုံး (KNU)
ကရင်အမျိုးသား အစည်းအရုံး (KNU) နှင့် တိုးတက်သော ကရင်ဗုဒ္ဒ ဘာသာ တပ်မတော် တို့သည် အနာဂတ် ဆက်ဆံရေး နှင့် ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်ရေး တို့အတွက် ယမန်နေ့က မြ၀တီခရိုင် ဆုံဆည်းမြိုင် ကျေးရွာရှိ ဒီကေဘီအေ ဌာနချုပ်တွင် အမြင်ချင်း ဖလှယ် ခဲ့ကြပါသည်။
ထိုအမြင်ဖလှယ်မှုဆွေးနွေးပွဲတွင်၊ KNU ဖက်က ဆွေးနွေးသူများမှာ၊
၁။ ပဒိုလှငွေ (တွဲဖက်အထွေအထွေ အတွင်းရေးမှူး (၁) —- အဖွဲ့ခေါင်းဆောင်။
၂။ ဗိုလ်ချုပ်ဖလယ်ကို ———————- KNLA ဒုဦးစီးချုပ်။
၃။ ပဒိုအောင်မောင်အေး ——————- ဥက္ကဌ (ဖါအံခရိုင်)
၄။ ဗိုလ်မှူးကြီး နယ်ဒါးမြ ——————– အဖွဲ့ဝင်
၅။ ဒုဗိုလ်မှူးကြီး နယ်ဂေါ်မြ (မောင်တေးလေး)————— အဖွဲ့ဝင်
၆။ ဒုဗိုလ်မှူးကြီးဖေါလို —————- အဖွဲ့ဝင်(၁၀၁ တပ်ရင်းမှူး)
၇။ ဗိုလ်မှူးလှဌေး —————- အဖွဲ့ဝင်
၁။ ဗိုလ်ချုပ် စောလားဖွယ်————– အဖွဲ့ခေါင်းဆောင်
၂။ ဗိုလ်မှူး လုံ့လုံ———————— အဖွဲ့ဝင်
၃။ ဗိုလ်မှူး ဆန်းအောင် ————— အဖွဲ့ဝင်
၄။ ဗိုလ်မှူးဟောင်း ရောဘတ်စံ————– အမေရိကန်နိုင်ငံ
၅။ ဗိုလ်မှူးဟောင်းကနဲနီ ————- ကေအန်ယူ ကိုယ်စားလှယ် သြစတြေးလျားနိုင်ငံ
၆။ ဗိုလ်မှူးဟောင်း မောသို —————– နော်ဝေးနိုင်ငံတို့လည်း ပါဝင်ဆွေးနွေးခဲ့ပါသည်။
(၁) အပစ်အခတ် ရပ်စဲရေး အခြေအနေကို အပြန်အလှန်ရှင်းပြခြင်း။
(၂) နိုင်ငံရေးအရ အစိုးရနှင့်ဆွေးနွေးသည့်အခါ ရပ်တည်ချက်တူညီရေး၊
(၃) အတိတ်က သင်ခန်းစာကို ယူပြီး အချင်းချင်း ပစ်ခတ်မှု မဖြစ်ရေးနှင့် မိတ်ဖက်ပဋ္ဋိပက္ခဖြင့်ဖြေရှင်းရေး။
(၄) တဖက်နှင့် တဖက်အမြင်မမှားရန်။
(၅) ကေအန်ယူ ဦးဆောင်မှုဖြင့် နိုင်ငံရေးအရလှုပ်ရှားရန်။
(၆) ကေအန်ယူနှင့် ပြန်လည်ပူးပေါင်းရေးကို တဖြည်းဖြည်း ဆွေးနွေးသွားရန် ၊ အမြင်ချင်းဖလှယ်ခဲ့ကြသည်ဟု
ဒီကေဘီအေဖက်မှ ဗိုလ်မှူးဆန်းအောင်နှင့် ကေအန်ယူဖက်က ပဒိုလှငွေတို့က ပြောပါသည်။
“ KNU ရဲ့ လမ်းစဉ် မူဝါဒနဲ့ပတ်သက်လို့ တကြိမ်တခါမှ ငြင်းပယ်ခဲ့တာမျိုး မရှိပါဘူး။ ဖြစ်သမျှအကြောင်းကို အကောင်းလို့ဘဲ သဘော ထားပြီး၊ တစုံတရာ အခြေအနေထိ ရှေ့ဆက် အကောင်အထည် ဖေါ်သွားဦးမယ်။ အကြံဥာဏ် တွေကိုတော့ ကေအန်ယူဆီမှာဘဲ တောင်းယူရမှာပါ”ဟု ဗိုလ်မှူးဆန်းအောင်က ပြောပါသည်။
ဆွေးနွေးပြီးသည့်အခါ ဆုံဆည်းမြိုင်တွင် ရှိသည့် ဒီကေဘီအေတို့၏ ဆေးသင်တန်းနှင့် ကုတင်(၅၀)ဆေးရုံ တည်ဆောက် နေမှုကို လေ့လာခဲ့ကြပါသည်။ ထို့အတူ ပြီးခဲ့သည့် မတ်လ(၆) ရက်နေ့ကလည်း ယခုဆွေးနွေးခဲ့သော ကေအန်ယူ အဖွဲ့ သည်၊ ဗိုလ်ချုပ်ဌေမောင် ဦးဆောင်သော ကရင်ငြိမ်းချမ်းရေးကောင်စီ၊မှ ဗိုလ်ချုပ်ဌေမောင်၊ ဗိုလ်မှူးကြီးရင်နု ၊ အယ်ဂေါ်ထူး တို့နှင့်လည်း ဆွေးနွေးခဲ့သည်ဟု ပဒိုစောလှငွေက ပြောပါသည်။
ဒီကေဘီအေနှင့် ကေအန်ယူတို့သည်၊ အစိုးရနှင့် အပစ်အခတ် ရပ်စဲရေးပြုလုပ်ပြီးနောက်ပိုင်းတွင် ယခုဆွေးနွေးမှုသည်၊ ပထမဆုံးအကြိမ် အမြင်ချင်း ဖလှယ်ခဲ့ကြခြင်း ဖြစ်ပါသည်။ ဒီကေဘီအေသည်၊ ၁၉၉၄ ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာလတွင် ကေအန်ယူ ထံမှ ခွဲထွက်ပြီး၊ ၁၉၉၅ တွင် တပ်အသွင် ဖွဲ့စည်းခဲ့ပါသည်။ (၂၀၁၀)ခုနှစ်တွင် ဒီကေဘီအေ နှစ်ခြမ်းကွဲပြီး၊ BGF အစိုးရ နယ် ခြားစောင့်တပ်ဖွဲ့နှင့် ဗိုလ်ချုပ်စောလားဖွယ် ဦးဆောင်သော ဒီကေဘီအေ တပ်ဖွဲ့ ဖြစ်သွားခဲ့ပါသည်။
7/4/57 #ม๊อบ #ขยะ #สังคม #ควาย #แดง #นปช.ที่ถ. #อักษะ